‘विदेशमा भाडा माझ्ने, स्वदेशमा सिन्काे पनि नभाँच्ने? अब बिद्यालयका कक्षा कोठा भत्काउनुपर्छ- कृषि वैज्ञानिक मदन राई - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home अन्तर्वार्ता ‘विदेशमा भाडा माझ्ने, स्वदेशमा सिन्काे पनि नभाँच्ने? अब बिद्यालयका कक्षा कोठा भत्काउनुपर्छ- कृषि वैज्ञानिक मदन राई
‘विदेशमा भाडा माझ्ने, स्वदेशमा सिन्काे पनि नभाँच्ने? अब बिद्यालयका कक्षा कोठा भत्काउनुपर्छ- कृषि वैज्ञानिक मदन राई
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १५:२६
कृषि वैज्ञानिक मदन राई, ७१, अहिले पनि सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सक्रिय छन्। बहुआयामिक व्यक्तित्व राई शिक्षा क्षेत्रको समेत विज्ञ मानिन्छन्। यहाँकाे केही कुरा यस्ताे छ ।
राणाकालमा पढ्नै पाइँदैनथ्यो। प्रजातन्त्र आईसकेपछि २००८ सालदेखि पढाउन थालियो । किताब पढाउन थालियो। किताब घोकाउन थालियो। यसपछि हलो–कोदालो गर्नु पर्दैन भन्ने संस्कृति सुरु भयो।
पढेपछि हलो जोत्न नहुने मान्यता
मुख्य कुरा नेपालमा तथाकथित शिक्षित मान्छे बेरोजगारमात्रै छैनन्। बेकामे र वास्तविक ठगहरु छन्! नेपालमा सबैभन्दा बढी ठगको संख्या शिक्षित भनिएकैहरुमा भेटिन्छन्। किनभने सरकारको शिक्षानीतिनै बेकामे प्रकार छ!
राणाकालमा पढ्नै पाइँदैनथ्यो। प्रजातन्त्र आईसकेपछि २००८ सालदेखि पढाउन थालियो । किताब पढाउन थालियो। किताब घोकाउन थालियो। यसपछि हलो–कोदालो गर्नु पर्दैन भन्ने संस्कृति सुरु भयो। यहाँबाट सुरु भएको संस्कृतिले ‘सर्टिफिकेट’ लिएपछि हलो–कोदालो गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता बसाइदियो। पछि पञ्चायत आयो। बहुदल आयो। तरपनि, शिक्षानीति फेरिएन। संस्कृति र मान्यता फेरिएन। बरु, पढेपछि काम गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता झन्झन् बलियोसँग स्थापित हुँदै आयो। यसखाले अप्राकृतिक मान्यताले नै शिक्षित कहलिएकाहरु बढी नालायक, ठग र बेरोजगार बन्दै आए!
शिक्षा लिएपछि हुनुपर्नेचाहिँ कर्मयोगी, ज्ञानी, सीपयुक्त र विवेकशील हो। तर, पटक्कै भएन। ज्ञान त छ नि, उसले अमेरिकाबारे बताउन सक्छ, धर्मबारे व्याख्या गर्न सक्छ, तर कर्म गर्नै सक्तैन। गाडी चलाउन आउँछ, खान आउँछ तर खेतबारीमा अन्न उत्पादन गर्नै जान्दैन। उसका बाबुबाजेले त गरेको थियो। तर, पढेपछि हलो जोत्न नहुने मानसिकताले ऊ गर्दैन।
शिक्षानीति नै अल्छे मानिस उत्पादन गर्ने साधन भयो नेपालमा। म स्पष्ट भन्छु, नेपालका यृुवाहरुलाई बिगार्ने नै शिक्षानीति हो! त्यो किताब घोकाउने नीति नै हो। यो गलत छ।
शिक्षानीति नै अल्छे मानिस उत्पादन गर्ने साधन भयो नेपालमा। म स्पष्ट भन्छु, नेपालका यृुवाहरुलाई बिगार्ने नै शिक्षानीति हो! त्यो किताब घोकाउने नीति नै हो। यो गलत छ। आपराधिक छ। यसलाई तुरुन्तै फेर्नुपर्छ। नत्र नेपाल पराधिनमात्रै होइन। नालायकको बस्ती बन्छ।
मैले मुलुकका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री प्रत्येक पटक फेरिँदा भन्दै आइरहेको छु। मैले किन यो भनिरहेको छु भने नेपालमा समस्यै शिक्षामा छ। नेपालमा उत्पादनको लागि असाध्यै मलिलो जमीन छ। यसबाट अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ। मलिलो जमीन छ, पुँजीको समस्यै होइन र बजार पनि छ। तर, जन छैन। किनभने जनले कामै गर्दैन। पैसा त वस्तु हो। यसको प्राप्तिको लागि हातखुट्टा चलाउनु पर्यो। काम गर्नुपर्यो। तर, शिक्षै यस्तो भइदियो कि कुर्सीमा बसेर घोक्ने।
एमए पास गरुन्जेलसम्म किताब घोक्ने हो। खेतबारीमा श्रम गर्न उसले हातै चलाउँदैन। बरु, उसको दिमाग चल्छ, दुनियाँभरको जानकारी हुन्छ तर श्रम गर्न मान्दैन। अन्ततः उसले पनि भोग त गर्नुपर्यो। यसकारण यहाँ उपभोक्तामात्रै उत्पादन भइरहेछ। उत्पादक (जनशक्ति) उत्पादन भएन। यसकारण मलिलो जमिन त छ नि नेपालमा। तर, शिक्षानीतिकै कारण ‘लेवरफोर्स’ (श्रमशक्ति) कमजोर छ।
८० प्रतिशत कृषिमा निर्भर तर कर्म शुन्य
कृषि भनेपछि माटोको काम हो। माटोमा जोत्नुपर्यो। चाहे त्यो ट्र्याक्टरै किन नहोस्, जोत्नु पर्यो। खन्नुपर्यो । गोबर यताउता ओसार्नु पर्यो। बोक्नुपर्यो। तर, शिक्षानीतिले के सिकायो भने, किताब घोकेपछि बारी खन्नुपर्दैन, हलो जोत्नुपर्दैन, कोदालो समाउनु पर्दैन भनेर सिकायो।
कृषि भनेकै एउटा कर्म हो। ८० प्रतिशत उपभोग्य सामग्री उत्पादन कृषि कर्मबाटै हुन्छ। खानेकुरा कृषिले उत्पादन गर्छ। लगाउने कपडा कृषिले उत्पादन गर्छ। कपडाका लागि कपास त कृषिले उत्पादन गर्ने हो नि। औषधि कृषिले उत्पादन गर्छ। बस्ने घर बनाउन काठ चाहियो। त्यो पनि कृषिले उत्पादन गर्छ। आगो बाल्न दाउरा चाहियो, त्यो पनि कृषिले उत्पादन गर्छ। भनेपछि मान्छेले उपभोग गर्ने ८० प्रतिशत चिज कृषि कर्ममा निर्भर छ। तर, कृषि भनेपछि माटोको काम हो। माटोमा जोत्नुपर्यो। चाहे त्यो ट्र्याक्टरै किन नहोस्, जोत्नु पर्यो। खन्नुपर्यो । गोबर यताउता ओसार्नु पर्यो। बोक्नुपर्यो। तर, शिक्षानीतिले के सिकायो भने, किताब घोकेपछि बारी खन्नुपर्दैन, हलो जोत्नुपर्दैन, कोदालो समाउनु पर्दैन भनेर सिकायो। यसखाले भ्रममा हामी रह्यौं। आठ सालदेखि अहिलेसम्म ६८ साल भयो किताब घोकाउन थालेको। अहिलेसम्म फिटिक्कै परिवर्तन छैन।
हुन त प्राविधिक शिक्षा भनेर सीटीईभीटी खडा गर्यो। त्यसले पनि कुनै व्यवहारिक रुपमा प्राविधिक शिक्षा सिकाउँदैन। यसो एउटा कोदालोको चित्र देखाउँछ। ट्र्याक्टरको चित्र देखाउँछ। तर, जोताउँदैन। चित्रमै सीमित राख्छ। यसकारण प्रमाणपत्रधारी शिक्षा जबसम्म रहन्छ, कुनैपनि कर्म हुँदैन। कर्म भनेको उत्पादनमूलक शिक्षा हो। यो कृषिसँग सम्बन्धित छ। यस्तो कुरा त हाम्रो शिक्षाले सिकाएकै छैन नि।
विदेशमा भाडा माझ्ने, स्वदेशमा बारीको डल्ला नफोर्ने
‘एग्रिकल्चर’ पढेका विद्यार्थीलाई सोध्नुस्, कोदालो खन्नु भएको छ? बीएस्सी र एमएस्सी पढेका विद्यार्थीलाई सोध्नुस् न। म बाजी राख्छु, उसले कोदालो खनेको छैन। धानमा पिएचडी गरेकाले बारीको माटो छोएको हुँदैन। समस्या यहाँनिर हो।
यसकारण विदेश जान्छन्। विदेशमा त अवसर धेरै छन्। भाँडा माझ्छन्। पढे लेखेकाले अलिअलि अंग्रेजी जानेको हुन्छ। चर्पी सोहोर्नु नपरेपनि चौकीदारी पाई हाल्छन्। नत्र प्लेट माझ्नु पनि सजिलै छ। रेष्टुरेन्टमा वेटर गर्नु सजिलो छ। उहाँ बायोलोजी विषयमा कलेज भर्ना त हुन्छन्। तर, सर्टिफिकेट लिएपछि माटोमा काम गर्न नेपाल आउँदैनन्। उतै काम गर्छन्। उहाँ त काम गर्नैपर्यो। काम भनेको त्यस्तै, चौकीदारी, भाडा माझ्ने, वेटर, चर्पी सफा गर्ने नै पाउने हुन् नि।
कक्षा कोठा भत्काउनुपर्छ
विद्यार्थीको ‘ब्रेनवास’ नगरी हुँदैन। अनि घोकाउने शिक्षा बन्द गर्नु पर्यो। यसैले म भन्छु, ‘क्लासरुम’ (कक्षाकोठा) भत्काउनुपर्छ। कक्षा कोठामा विद्यार्थी कैदीजस्तामात्रै भए। उनीहरुलाई थुनिएर राखिएको छ। म त भन्छु, १२ कक्षासम्म पढाउनै पर्दैन। पाँच वर्ष सिकाएमा १२ वर्षको कुरा छ्याङ्ग बुझ्छन्। बुद्धुहरुका लागि सात वर्ष लाग्ला !
अहिलेसम्म किताब पढाउने सभ्यता सुरु भएको ६ हजार वर्ष भइसक्यो। यो सकियो अब। नयाँ सभ्यता सुरु हुनुपर्छ। अक्षरको सभ्यता लगभग सकियो। भौतिक वस्तु र तरंगको सभ्यता सुरु भयो।
म किन यसो भन्दैछु भने, विगत दस वर्षदेखि सरकारी र निजी विद्यालयमा पढाई हुने पाठ्यक्रमबारे अध्ययन गर्दै आइरहेको छु। विद्यार्थीलाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्। कुनैपनि अभिभावकले यतातिर ध्यानै दिइरहेका छैनन्। स्कुलमा कक्षा १ देखि १२ सम्म एकै प्रकृतिका शिक्षा दोहो¥याईकन पढाई भइरहेछ। विद्यार्थीले सर्टिफिकेटका लागि पास हुनुपर्ने गरीमात्रै पढिरहेका छन्। अथवा, पढाई नै त्यस्तै प्रकारले चलिरहेको भेटिन्छ। यथार्थतः समयमात्रै बर्बाद भइरहेछ। समस्यै यहीँनिर छ। यसलाई त बदल्नै पर्छ।
पञ्चायत कालमा त जनतालाई लाटै राख्नको लागि दोहोर्याई–दोहोर्याई अलमलाएर राख्नु त ठीकै थियो। अब त लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आईसक्यो। अब त सबै जनशक्तिलाई सक्षम बनाएर देशको जिडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) बढाउन लाग्नुपर्छ। यसैले उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिँदै हरेकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। उनीहरुले गर्ने आम्दानीबाट कर लिनुपर्छ र राज्यको आयस्रोत वृद्धि हुन्छ र समृद्धितर्फ लम्किन सकिन्छ। तर, आजसम्म यस्तो भइरहेको छैन। यसैले मैले आफै खोटाङमा परम्परागत स्कुलको भन्दा भिन्नखाले पढाई हुने स्कुल सञ्चालन गरेको छु। जहाँ पूर्णतयाः फरक प्रकारको शिक्षा दिने/लिने विधि अपनाइएको छ।
त्यो वैकल्पिक शिक्षै हो अथवा अबको शिक्षा। नयाँ संस्कृति र सभ्यताको शिक्षा हो। अहिलेसम्म किताब पढाउने सभ्यता सुरु भएको ६ हजार वर्ष भइसक्यो। यो सकियो अब। नयाँ सभ्यता सुरु हुनुपर्छ। अक्षरको सभ्यता लगभग सकियो। भौतिक वस्तु र तरंगको सभ्यता सुरु भयो। तपाईंले रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ नि, यो मेरो ‘रियल भ्वाईस’(यथार्थ आवाज) हो। अक्षर पनि चाहिन्छ, जरुरी छ तर बिस्तारै अक्षरको महत्व समाप्त हुँदैछ। अब प्राकृतिक रुपमै जानुपर्छ। आवाज त प्राकृतिक हो।
ट्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु
पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ :- झलनाथ खनाल
बागलुङमा बाम ११ सय भन्दा बढी मतले अग्रता,
१५ मंसिर २०७६, आईतवार २२:०५
२६ श्रावण २०७४, बिहीबार ००:०६
भारतमा गाई संरक्षणवादीको अभियानबाट पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
६ आश्विन २०७४, शुक्रबार २१:५७
आँप खानेले विष खाइरहेका छन्, विषादी प्रयोग गरेर पकाएकाले नखान चिकित्सककाे अनुराेध
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १८:५२